Shiinaha TQSF Taxanaha Cus-jiidad wax soo saarka iyo Warshada |Chinatown
Taxanaha TQSF Cufis-jiidad ee nadiifinta hadhuudhka, Si loo saaro dhagaxa, Si loo kala saaro hadhuudhka, Si loo saaro wasakhda iftiinka iyo wixii la mid ah.
Kala-soocida dhagaxa Tani waxay leedahay wax-qabad weyn oo kala saarid.Waxay ka saari kartaa dhagxaanta iftiinka ee cabbirka hadhuudhka qulqulka hadhuudhka, iyada oo wax weyn ka geysanaysa helitaanka alaabada saxda ah ee la xidhiidha heerarka nadaafadda cuntada.
Maaddadu waxay ku dhacdaa saxanka hagaha ee ka soo gelitaanka oo ku dabool si siman dhammaan ballaca shaandhada sare sababtoo ah ficil gariirka mashiinka.Ficilka isku dhafan ee gariirka iyo socodka hawada ayaa ka dhigaya walxaha shaandhada sare ee si toos ah loo kala saaray iyada oo loo eegayo cufnaanta gaarka ah iyo cabbirka granular.Walxaha khafiifka ahi waxay noqdaan dabada shaandhada sare oo laga soo saaro mishiinka dabada mishiinka.Waxyaabo badan oo fudud sida caws iyo boodh ayaa laga qaadayaa meesha hamiga.Waxyaabo culus oo ay weheliyaan dhagaxyo iyo ciid ayaa ku dhacaya shaandhada hoose iyada oo sii maraysa shaandhada sare.Sida ficilka gariirka mishiinka, socodka hawada iyo is jiid jiidka, walxaha culus waxay u dhaqaaqaan dabada mashiinka waxayna ka soo baxayaan meesha dabada ah halka ciidda iyo dhagxaanta ay u dhaqaaqaan madaxa mashiinka oo laga soo saaro dhagaxa dhagaxa.Daaqadaha fiirsashada, hawlwadeenku wuxuu si toos ah u eegi karaa saamaynta kala soocidda iyo dhagax-dhigista.
- Sanduuqa shaandhada ee inta badan lagu dhejiyo shaandho laba lakab ah ayaa lagu taageeraya ilo caag ah oo godan, waxaana sababa inay gariiraan hal ama laba gariir oo ku salaysan mashiinka fulinta.
- Si loo gaaro heerka ugu sarreeya ee kala-soocidda iyo kala-soocidda, u janjeersiga shaandhada, mugga hawada iyo sidoo kale kala-soocidda ugu dambeysa ayaa lagu hagaajin karaa si waafaqsan.
- Mashiinka burburinta ayaa ku habboon in laga saaro dhagxaanta qulqulka hadhuudhka ee joogtada ah
- Iyada oo ku saleysan farqiga u dhexeeya cuf-jiidka gaarka ah, ka saarista wasakhda cufnaanta sare leh sida dhagxaanta, dhoobada iyo qaybaha birta iyo dhalooyinka ayaa lagu gaaraa.
- Sida mid ka mid ah mashiinnada nadiifinta badarka ee ugu caansan, waxaa si weyn looga faa'iidaystaa qaybta nadiifinta alaabta ceeriin ee warshadaha daqiiqda, warshada bariiska, warshada quudinta iyo warshadaynta miraha.
1) Kala saarid iyo dhagax-dhigid la isku halleyn karo oo heer sare ah.
2) Cadaadis xun, ma jiro boodh buufinaya.
4) Hawl fudud iyo dayactir.
Saxanka shaandhada sare:
Saddex qaybood oo shaashad ah oo leh godadka cabbirka kala duwan ayaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo kala-soocidda tooska ah ee alaabta.
Saxanka shaandhada hoose:
Waxay ka shaqeysaa dusha sare ee ka saarista dhagaxa oo leh waxtar sare leh.
Si aad shaandhada uga ilaaliso inay xidho adigoo nadiifinaya shaandhada si wax ku ool ah.
Balaadhan iyo tilmaame xagasha shaashadda:
Baaxadda iyo xagasha shaashadda waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo tusaha.
Hagaajinta albaabka dabaysha:
Mugga hawada waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo sifooyinka maaddada , si loo gaaro saameyn wanaagsan oo dhagax ah.
Hore: Isku darka Daqiiqda
Xiga: Daqiiqda qas
Mashiinka wax qarxiya
abuur mashiinka qarxiyaha
Mashiinka Nadiifinta Hadhuudhka
Mishiinka Burburinta Hadhuudhka
Dampener degdeg ah